Nzira yekudzidzisa mavhinga vevatsvaga - ITS Tech School
Mazano ekudzidzisa kwePythoni
Shandisa Interpreter Well
Edza kusazeza kukumbira rubatsiro
Kudzidzisa kwakarongeka kana musasa wekudzidzisa
Isa zvishandiswa muzvivako zvakasununguka
Pane misiyano miviri yakasiyana yePython (2 ne3) uye iwe uchada kusarudza kuti ndiani achakubatsira iwe kunyanya zvichienderana nehutano hwaunoda kuwana mune basa rako kana munda wekuita. Zvose izvi zvakasiyana-siyana zvinotarisa zvikuru uye zvinotyisa zvinotarisa munharaunda yepurogiramu uye iwe unogona kuita iwe pachako kutsvaga pamusoro pezviviri kuti usarudze iyo yaunganyatsotarisa kune dzimwe nguva.
Iyo muturikiri anogona kukwanisa kushandisa zvido zvako uye anokupa mazano pamusoro pezvo; kuitira kuti magwaro aifanira kufambira mberi uye izvo zvavanotaridzika sezviri kunyanya kuitika. Pakatangira mapoka ekutanga Python training, izvi zvinogona kukubatsira zvechokwadi. Muturikiri anopa kuenderera mberi kwekutumirwa kwemahofisi ayo munguva pfupi yakakwana kukupa musoro unotanga mukudzidza Python programming.
Kudzidza imwe purogiramu mutauro hakusi nyore uye kuchava nenguva apo iwe uchanonoka pane dzimwe nhamba uye mamiriro mashoma. Iwe unogona kutarisa rubatsiro rwemutauro mumhando yePython yakasikwa yakasiyana communities pane yebhu nzvimbo uye shandisa simba ravo pakukunda zvikamu zvakakosha zvePython Programming yako.
Kana iwe uri wechokwadi zvekudzidza purogiramu yemutauro iwe unofanirwa kunge usina kufara kuwana ruzivo rwakarongeka kana kusarudza pane imwe dzidzo mune imwe nzvimbo yakasimba yekudzidzisa nzvimbo. Hapana nzira dzakasiyana kana iwe uchitsvaga chimiro chisina kujairika chimiro chepamusoro uye nzvimbo yakakwirira yekudzidzira inogona kukugadzirisa iwe kazhinji inobatsira uye inonyanya kuipa mamiriro ezvinhu mumutauro wekugadzira nekururama. Ita tsvakurudzo yako pachake uye utore gwara kana chirevo kana chero rudzi rwekudzidzira kwakadzika kuti uwedzere hurongwa hwako hwekugadzirisa mukugadzirisa kweyanyanzvi kuti iwe uite kunze nguva dzose.
Mushure mekudzidza kana kuwana kugadzirisa pamiti nenyuchi dzemutauro, unogona kuisa mukana wako mune zvakasiyana-siyana zvepurojekiti yakasununguka, sezvo izvi hazvingokubatsiri kuti ushandise uye kunzwisisa dzimwe nhamba dzevanhu, kunyange zvakadaro zvichakupawo mikana yakawanda yekupa uye kuwedzera maitiro ako chaiwo ekunyora sezvakaitwa. Hapana chikonzero chinokumanikidza kuti unzwe uchininipiswa pamusoro pekodzero dzako dzekunyora sekuzvipa iyo nguva yose ichavatsigira zvakanyanya nguva yacho.
Onawo: ITIL Certification - A Complete Guide